26.03.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– जसरी तिमी आत्माहरूलाई यो शरीररूपी सिंहासन मिलेको छ , त्यस्तै बाबा पनि यी दादाको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ , उहाँको आफ्नो सिंहासन छैन।”
जुन बच्चाहरूलाई ईश्वरीय सन्तानको स्मृति रहन्छ, उनीहरूको निशानी के हुन्छ?
उनीहरूको सच्चा प्रेम एक बाबासँग हुन्छ। ईश्वरीय सन्तान कहिल्यै पनि आपसमा लड्दैनन्, झगडा गर्दैनन्। उनको कुदृष्टि कहिल्यै हुन सक्दैन। जब ब्रह्माकुमार-कुमारी अर्थात् भाइ-बहिनी बन्छन् भने विकारी दृष्टि जान सक्दैन।
अब बच्चाहरूले जानेका छन्– बाबाले आकाश सिंहासन छोडेर यी दादाको तनलाई आफ्नो सिंहासन बनाउनु भएको छ, त्यो छोडेर यहाँ आएर बस्नुभएको छ। यो आकाश तत्त्व त हो जीव आत्माहरूको सिंहासन। आत्माहरूको सिंहासन हो त्यो महतत्त्व, जहाँ तिमी आत्माहरू विना शरीर रहन्थ्यो। जसरी आकाशमा सितारा स्थित छन् नि, त्यस्तै तिमी आत्माहरू पनि धेरै सूक्ष्म-सूक्ष्म त्यहाँ रहन्छौ। आत्मालाई दिव्य दृष्टि विना देख्न सकिँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले यो ज्ञान छ, जसरी तारा कति साना छन् त्यस्तै आत्माहरू पनि बिन्दी समान छन्। अहिले बाबाले सिंहासन त छोडिदिनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी आत्माहरू पनि सिंहासन छोडेर यहाँ यस शरीरलाई आफ्नो सिंहासन बनाउँछौ। मलाई पनि अवश्य शरीर हुनुपर्छ। मलाई बोलाउँछन् नै पुरानो दुनियाँमा। गीत छ नि– दूर देश का रहने वाला....। तिमी आत्माहरू जहाँ रहन्छौ, त्यो हो तिमी आत्माहरू र बाबाको देश। फेरि तिमी स्वर्गमा जान्छौ, जसको स्थापना बाबाले गराउनु हुन्छ। बाबा स्वयं त्यस स्वर्गमा आउनुहुन्न। स्वयं त वाणी भन्दा पर वानप्रस्थमा गएर रहनुहुन्छ। स्वर्गमा उहाँको आवश्यकता पर्दैन। उहाँ त दु:ख-सुखबाट अलग हुनुहुन्छ। तिमी त सुखमा आउँछौ, अनि दु:खमा पनि आउँछौ।
अहिले तिमीलाई थाहा छ, हामी ब्रह्माकुमार-कुमारीहरू भाइ-बहिनी हौं। एक आपसमा कुदृष्टिको ख्याल पनि आउनु हुँदैन। यहाँ त तिमी बाबाको सम्मुखमा बसेका छौ, आपसमा भाइ-बहिनी हौ। पवित्र रहने युक्त हेर कस्तो छ। यी कुरा शास्त्रहरूमा छैनन्। सबैका पिता एक हुनुहुन्छ, त्यसैले सबै बच्चाहरू भए नि। बच्चाहरूले आपसमा लडाईं-झगडा गर्नु पनि हुँदैन। यस समय तिमीले जानेका छौ– हामी ईश्वरीय सन्तान हौं, पहिला आसुरी सन्तान थियौं, फेरि अब संगममा ईश्वरीय सन्तान बनेका छौं। फेरि सत्ययुगमा दैवी सन्तान हुन्छौं। यो चक्रको बारेमा बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ। तिमी ब्रह्माकुमार-कुमारी हौ, फेरि कहिल्यै कुदृष्टि जाँदैन। सत्ययुगमा कुदृष्टि हुँदैन। कुदृष्टि रावणको राज्यमा हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई केवल एक बाबा सिवाय अरू कसैको याद रहनु हुँदैन। सबैभन्दा धेरै एक बाबामा प्रेम होस्। मेरो त एक शिवबाबा दोस्रो न कोही। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! अब तिमीलाई शिवालयमा चल्नु छ। शिवबाबाले स्वर्ग स्थापना गरिरहनु भएको छ। आधाकल्प रावण राज्य चल्यो, जसबाट दुर्गति पायौ। रावण के हो, उसलाई किन जलाउँछन्, यो पनि कसैले जानेका छैनन्। शिवबाबालाई पनि जानेका छैनन्। जसरी देवीहरूलाई सजाएर, पूजा गरेर डुबाउँछन्, शिवबाबाको पनि माटोको लिंग बनाएर पूजा आदि गरेर फेरि माटो, माटोमा मिलाइदिन्छन्। त्यस्तै गरी रावणलाई पनि बनाएर फेरि जलाइदिन्छन्। तर केही पनि बुझ्दैनन्। भन्ने पनि गर्छन्– अहिले रावण राज्य हो, रामराज्य स्थापना हुनु छ। गान्धी पनि रामराज्य चाहन्थे, यसको मतलब रावण राज्य छ नि। जो बच्चाहरू यस रावण राज्यमा काम चितामा बसेर जलेका छन्, बाबा आएर फेरि उनीहरूमाथि ज्ञान वर्षा गर्नुहुन्छ, सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। जसरी सुख्खा जमीनमा वर्सात् भएपछि घाँस उम्रिन्छ नि, तिमीमाथि ज्ञानको वर्षा नहुनाले कति कंगाल बनेका थियौ। अहिले फेरि ज्ञान वर्षा हुन्छ, जसबाट तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। रहन त तिमी बच्चाहरू गृहस्थ व्यवहारमा रहन्छौ, तर भित्र धेरै खुशी रहनु पर्छ। जसरी कोही गरिबका छोरा-छोरीले पढ्छन् भने पढाइबाट अधिवक्ता आदि बन्छन्। उनीहरू पनि ठूला-बडाको साथमा बस्छन्, खान्छन्, पिउँछन्। भिलनी (सबरी)को कुरा पनि शास्त्रहरूमा छ नि।
तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– जसले सबैभन्दा धेरै भक्ति गरेका छन्, उनै आएर सबैभन्दा धेरै ज्ञान लिन्छन्। सबैभन्दा धेरै सुरुदेखि त हामीले भक्ति गरेका हौं। फेरि हामीलाई नै बाबाले स्वर्गमा पहिला-पहिला पठाइदिनुहुन्छ। यो हो ज्ञानयुक्त यथार्थ कुरा। वास्तवमा हामी नै पूज्य थियौं, फेरि पुजारी बन्छौं। तल उत्रिन्छौं। बच्चाहरूलाई सारा ज्ञान सम्झाइन्छ। यस समय यो सारा दुनियाँ नास्तिक छ, बाबालाई जानेका छैनन्। नेति-नेति भनिदिन्छन्। पछि गएर यी संन्यासी आदि सबै आएर आस्तिक अवश्य बन्छन्। कुनै एक संन्यासी आए भने उनको सबैलाई विश्वास कहाँ हुन्छ र। भन्छन्– यिनलाई बी.के. ले जादु लगाएका हुन्। उनको शिष्यलाई गद्दीमा बसाएर उनलाई उडादिन्छन्। यस्ता धेरै संन्यासी तिम्रो पासमा आएका छन्, फेरि गुम हुन्छन्। यो हो धेरै अद्भुत ड्रामा। अहिले तिमी बच्चाहरूले आदिदेखि लिएर अन्त्यसम्म सबै जानेका छौ। तिमीहरू मध्ये पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण गर्न सक्छन्। बाबाको पासमा सारा ज्ञान छ, तिम्रो पासमा पनि हुनुपर्छ। दिन-प्रतिदिन कति सेन्टरहरू खुल्दै जान्छन्। तिमी बच्चाहरू धेरै दयालु बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ– आफैंलाई दया गर। निर्दयी नबन। आफूलाई नै दया गर्नु छ। कसरी? त्यो पनि सम्झाइरहनु हुन्छ। बाबालाई याद गरेर पतितबाट पावन बन्नु छ। फेरि कहिल्यै पतित बन्ने पुरुषार्थ गर्नु हुँदैन। दृष्टि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। हामी ब्राह्मण ईश्वरीय सन्तान हौं। ईश्वरले हामीलाई गोदमा लिनुभएको हो नि। अब मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। पहिला सूक्ष्मवतनवासी फरिश्ता बन्छौं। अहिले तिमी फरिश्ता बनिरहेका छौ। सूक्ष्मवतनको पनि रहस्य बच्चाहरूलाई सम्झाएको छु। यहाँ हुन्छ टकी, सूक्ष्मवतनमा हुन्छ मुवी, मूलवतनमा हुन्छ साइलेन्स। सूक्ष्मवतन हो फरिश्ताहरूको वतन। जसरी भूतको छायाँको शरीर हुन्छ नि। आत्मालाई शरीर नमिलेपछि भड्किइरहन्छ, त्यसलाई भूत भनिन्छ। उसलाई यी आँखाले पनि देख्न सकिन्छ। यो फेरि हो सूक्ष्मवतनवासी फरिश्ता। यी सबै कुरा धेरै बुझ्नु पर्ने छन्। मूलवतन, सूक्ष्मवतन, स्थूलवतन– यसको तिमीलाई ज्ञान छ। घुमफिर गर्दा बुद्धिमा यो सारा ज्ञान रहनु पर्छ। हामी वास्तवमा मूलवतनका निवासी हौं। अब हामी सूक्ष्मवतन हुँदै त्यहाँ जान्छौं। बाबा सूक्ष्मवतन यसै समय रच्नुहुन्छ। पहिला सूक्ष्म फेरि स्थूल हुन्छ। अहिले यो हो संगमयुग। यसलाई ईश्वरीय युग भनिन्छ, त्यसलाई दैवी युग भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई कति खुशी हुनुपर्छ। कुदृष्टि जान्छ भने फेरि उच्च पद पाउन सक्दैनौ। अहिले तिमी ब्राह्मण-ब्राह्मणी हौ नि। फेरि घर पुगेर बिर्सिनु छैन। तिमीहरू संगदोषमा आएर बिर्सिन्छौ। तिमी हंसहरू ईश्वरीय सन्तान हौ। तिम्रो कसैसँग पनि आन्तरिक ममत्व हुनु हुँदैन। यदि ममत्व जान्छ भने भनिन्छ मोहको बाँदरनी।
तिम्रो धन्दा नै हो सबैलाई पावन बनाउनु। तिमी हौ विश्वको स्वर्ग बनाउनेवाला। कहाँ ती रावणका आसुरी सन्तान, कहाँ तिमी ईश्वरीय सन्तान। तिमी बच्चाहरूलाई आफ्नो अवस्था एकरस बनाउनको लागि सबै कुरा देखेर पनि मानौं देख्नु नै छैन, यो अभ्यास गर्नु छ। यसमा बुद्धिलाई एकरस राख्नु हिम्मतको कुरा हो। सम्पूर्ण बन्न मेहनत लाग्छ। सम्पूर्ण बन्न समय लाग्छ। जब कर्मातीत अवस्था होस्, तब त्यो दृष्टि बस्छ, तबसम्म केही न केही आकर्षण भइरहन्छ। यसमा बिल्कुल उपराम हुने पर्ने हुन्छ। लाइन क्लियर हुनुपर्छ। देखेर पनि मानौं तिमीले देख्दैनौ, यस्तो अभ्यास जसको हुन्छ, उसैले उच्च पद पाउँछ। अहिले यो अवस्था कहा छ र। संन्यासीहरूले त यी कुरा बुझ्दा पनि बुझ्दैनन्। यहाँ त धेरै मेहनत लाग्छ। तिमीले जानेका छौ– हामी पनि यस पुरानो दुनियाँको संन्यास गरेर बसेका छौं। बस्, हामीलाई त अब परमधाम (स्वीट साइलेन्स होम)मा जानु छ। अरू कसैको बुद्धिमा छैन, जति तिम्रो बुद्धिमा छ। तिमीले नै जानेका छौ, अब फर्केर जानु छ। शिव भगवानुवाच पनि छ– उहाँ पतित-पावन, लिबरेटर, गाइड हुनुहुन्छ। कृष्ण कुनै गाइड होइनन्। यस समय तिमी पनि सबैलाई मार्ग बताउन सिक्छौ, त्यसैले तिम्रो नाम पाण्डव राखेका छन्। तिमी पाण्डव सेना हौ। अहिले तिमी देही-अभिमानी बनेका छौ। जानेका छौ– अब फर्केर जानु छ, यो पुरानो शरीरलाई छोड्नु छ। सर्पको उदाहरण, कुमालकोटीको उदाहरण– यी सबै हुन् तिम्रो यस समयको। तिमी अहिले प्राक्टिकलमा छौ। उनीहरूले त यो धन्दा गर्न सक्दैनन्। तिमीलाई थाहा छ– यो कब्रिस्तान हो, अब फेरि परिस्तान बन्छ।
तिम्रो लागि सबै दिन लकी छन्। तिमी बच्चाहरू सधैं लकी छौ। गुरुवारको दिन बच्चाहरूलाई स्कुलमा भर्ना गर्छन्। यो चलन चल्दै आएको छ। तिमीहरूलाई अहिले बृक्षपतिले पढाउनु हुन्छ। यो बृहस्पतिको दशा तिम्रो जन्म-जन्मान्तर चल्छ। यो हो बेहदको दशा। भक्तिमार्गमा हदको दशाहरू चल्छन्, अहिले हुन्छ बेहदको दशा। त्यसैले पूरा मेहनत गर्नुपर्छ। लक्ष्मी-नारायण कोही एक जना मात्रै त हुँदैनन् नि। उनीहरूको त राजवंश (डिनायस्टी) हुन्छ नि। अवश्य धेरैले राज्य गर्छन्। लक्ष्मी-नारायणको सूर्यवंशी डिनायस्टीको राज्य थियो, यी कुरा पनि तिम्रो बुद्धिमा छ। तिमी बच्चाहरूलाई यो पनि साक्षात्कार भएको छ, राज-तिलक कसरी दिन्छन्। सूर्यवंशीले फेरि चन्द्रवंशीलाई कसरी राज्य दिन्छन्। माता-पिताले बच्चाको गोडा धोएर राज-तिलक दिन्छन्, राज्य-भाग्य दिन्छन्। यो साक्षात्कार आदि सबै ड्रामामा निश्चित छ, यसमा तिमी बच्चाहरूलाई अल्मलिनु आवश्यक छैन। तिमी बाबालाई याद गर, स्वदर्शन चक्रधारी बन अनि अरूलाई पनि बनाऊ। तिमी हौ ब्रह्मा मुख वंशावली स्वदर्शन चक्रधारी सच्चा ब्राह्मण, शास्त्रहरूमा स्वदर्शन चक्रद्वारा हिंसा देखाएका छन्। अहिले बाबा तिमी बच्चाहरूलाई सच्चा गीता सुनाउनु हुन्छ। यो त कण्ठ गर्नुपर्छ। कति सहज छ। तिम्रो सारा सम्बन्ध छ नै गीतासँग। गीतामा ज्ञान पनि छ भने योग पनि छ। तिमीहरूले पनि एउटै मात्र किताब बनाउनु पर्छ। योगको किताब अलग बनाउने आवश्यकता छैन। तर आजकल योगको धेरै नाम चलेको छ, त्यसैले नाम राखिन्छ, जसले गर्दा मानिसहरू आएर बुझून्। आखिर योग एक बाबासँग लगाउनु छ, यो पनि बुझ्छन्। जसले सुन्छन्, फेरि आएर आफ्नो धर्ममा उच्च पद पाउने छन्। अच्छा।
१) आफूमाथि आफैले दया गर्नु छ, आफ्नो दृष्टि धेरै राम्रो पवित्र राख्नु छ। ईश्वरले मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि आफ्नो बनाउनु भएको हो, त्यसैले पतित बन्ने कहिल्यै ख्याल पनि नआओस्।
२) सम्पूर्ण, कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नको लागि सधैं उपराम रहने अभ्यास गर्नु छ। यस दुनियाँका सबैथोक देखेर पनि देख्नु छैन। यस अभ्यासले अवस्था एकरस बनाउनु छ।
श्रेष्ठ पालनाको विधिद्वारा वृद्धि गर्ने सर्वको बधाईको पात्र भव
संगमयुग बधाईद्वारा नै वृद्धि प्राप्त गर्ने युग हो। बाबाको, परिवारको बधाईद्वारा नै तिमी बच्चाहरूले पालना पाइरहेका छौ। बधाईद्वारा नै नाच्दै, गाउँदै, पालना लिँदै, उड्दै गइरहेका छौ। यो पालना पनि अनौठो छ। तिमी बच्चाहरू पनि विशाल दिलबाट, दयाको भावनाबाट, दाता बनेर हर घडी एक अर्कालाई धेरै राम्रो, धेरै राम्रो भन्दै बधाई दिइराख– यही पालनाको श्रेष्ठ विधि हो। यस विधिद्वारा सबैको पालना गरिरह्यौ भने बधाईको पात्र बन्छौ।
आफ्नो स्वभाव सरल बनाउनु नै समाधान स्वरूप बन्ने सहज विधि हो।
मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य:–
आधा कल्प ज्ञान ब्रह्माको दिन र आधाकल्प भक्ति मार्ग ब्रह्माको रात
आधाकल्प हुन्छ ब्रह्माको दिन, आधाकल्पको हुन्छ ब्रह्माको रात। अब रात पूरा भएर दिन आउनु छ। परमात्मा आएर अन्धकारलाई अन्त्य गरेर दिनको सुरुआत गर्नुहुन्छ। ज्ञानको हो प्रकाश, भक्ति हो अन्धकार। गीतमा पनि भनिएको छ– इस पाप की दुनियाँ से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पावे... यो हो बेचैन दुनियाँ, जहाँ चैन छैन। मुक्तिमा त न चैन, न बेचैन हुन्छ। सत्ययुग त्रेतायुग हो चैनको दुनियाँ, जुन सुखधामलाई सबैले याद गर्छन्। अब चैनको दुनियाँमा गइरहेका छौं। त्यहाँ कोही अपवित्र आत्मा जान सक्दैन। ऊ त अन्त्यमा धर्मराजको डन्डा खाएर कर्म-बन्धनबाट मुक्त भएर शुद्ध संस्कार लिएर जान्छ। किनकि सत्ययुगमा न अशुद्ध संस्कार हुन्छ, न पाप हुन्छ। जब आत्माले आफ्नो असली पितालाई भुल्छ, यो भूल भुलैयाको अनादि खेल हार जितको बनेको छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान् परमात्माद्वारा शक्ति लिएर विकारहरूमाथि विजयी बनेर २१ जन्मको लागि राज्य भाग्य लिइरहेका छौं। अच्छा, ओम् शान्ति।